Nagu saabsan - Shanghai Jiesheng Robot Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay Febraayo 23, 2011, Shanghai Jiesheng Robot Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare oo ballaadhan ku takhasustay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka, iyo suuq-geynta qalabka iyo agabyada aaladaha aaladaha warshadaha, alxanka iyo goynta, iyo bixinta adeeg farsamo oo dhameystiran. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay soo saarto shirkadda: aaladaha Yaskawa, unugga shaqada ee alxanka, saldhigga shaqada ee alxanka, qolka shaqada ee alxanka, qalabka alxanka iyo qalabka.
Muddo 10 sano ah oo shaqo adag ah, 10 sano oo si taxaddar leh loo soo saaray, iyo 10 sano oo adeeg hufan ah, Shanghai Jiesheng waxay si adag uga shaqeysay dhanka aaladaha robotikada, iyadoo ay ka go’an tahay inay wax soo saarto, waxayna ku guuleysatay natiijooyin mira dhal ah waxayna sifeysay shirkad hormuud u ah warshadaha robotikada. Mid ka mid ah mashruucyada kale ayaa si guul leh loo gaarsiiyey, iyo hal xariiq oo wax soo saar ah midba kan kale ayaa sifiican loo bilaabay. Tan waxaa ka dambeeya shaqada adag ee shaqaalaheena Jiesheng laga bilaabo naqshadeynta illaa wax soosaarka illaa gaarsiinta.
Sida uu sheegay Chen Lijie, maareeyaha guud ee Jiesheng, Jiesheng waa inay hirgelisaa istiraatiijiyadda astaanta adeegga, macaamilku waa aasaaska, shaqaaluhuna waa xirfadleyda fuliya istiraatiijiyadda astaanta. Kaliya iyadoo si joogto ah loo cusbooneysiiyo loona sifeeyo dhaqamadeena aasaasiga ah iyo isku xirnaanta qanacsanaanta macaamiisha ayaan ku guuleysan karnaa. Iyadoo loo marayo hirgelinta istiraatiijiyadda adeegga "habka ugu fiican", waxaan abuuri doonnaa koox ku qanacsan macaamiisha iyo shirkad ganacsi oo leh shaqaale raaxo leh.
Xaqiijinta warshadaha ee shirkadda iyo kalsoonida macaamiisha ee shirkaddu waxay go'aamiyaan inta ay suuqa ka gaari karto. Toban sano waa xilli aad u gaaban oo ku jira webiga dheer ee taariikhda. Jiesheng, 10 sano waa 10 sano oo isbedel iyo horumar ah, 10 sano oo abuur qurux badan leh, iyo 10 sano oo si xawli ah ku socota. Markaan doonayno inaan safar cusub galno, dhamaan shaqaalaheena Jiesheng waxaa ka buuxa tamar, diyaarna u ah inay soo dhaweeyaan 10-ka sano ee sharafta leh.
Wax soosaarka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa alxanka qaansada, alxanka barta, dhejinta, goynta, maaraynta, palletizing, rinjiyeynta, cilmi baarista cilmiga iyo waxbarista. Bixi naqshadaynta qalabka otomaatiga, rakibidda iyo adeegyada iibka kadib iibinta ee soo saarayaasha qaybaha baabuurta.
Istaraatiijiyadda shirkadda: Bixi xalalka otomaatiga Shiinaha ee macaamiisha adduunka;
Falsafadeena: Noqo shirkad tayo sare leh oo qalab otomaatig ah oo robotka ah;
Qiimahayaga: Kooxda tartanka, hormoodka iyo ganacsiga, hal-abuurnimo isdaba-joog ah, iyo geesinimo loo tartamo;
Hadafkeena: Waxaan siinaa macaamiisha wax soo saar tayo sare leh iyo adeegyo tayo sare leh;
Tiknoolajiyadeena: Waxaa taageera koox farsamo oo sare.
Cinwaanka xarunta: Lambarka 319, Wadada Huting, Degmada Songjiang, Shanghai
Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Qabashada Gacanta Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, 6 Axis Qabashada Robot,